Ulwazi lwe-Visa yase-UK - Isikolo soLwimi oluPhakathi, iCambridge
Kuxhomekeke kubuzwe bakho kunye nokuba ufuna ukuza e-UK ixesha elingakanani, kuya kufuneka ufake isicelo sevisa. Ukuhlala ukuya kwiinyanga ezi-6 yiVisa yokundwendwela esemgangathweni, kunye nokuhlala iinyanga ezi-6-11, iVisa yokuFunda yeXesha elifutshane. Nceda ujonge oku kwiwebhusayithi kaRhulumente wase-UK www.gov.uk/apply-uk-visa apho unokufumanisa ukuba ufuna i-visa, kwaye unokufaka isicelo kwi-Intanethi. Senze uphando ngale ndawo kwaye, nangona singakulungelanga ukunika ingcebiso kwezomthetho, siyaqonda ukuba xa ungathanda ukufaka isicelo sevisa kufuneka ube namaxwebhu achanekileyo kubandakanya:
I-Letter of Acceptance yakho eqinisekisa ukuba uyamkelwe kwikhosi kwaye uhlawule iimali zakho. Ileta iya kunika ulwazi malunga nekhosi.
Ubungqina bokubonisa ukuba unayo imali eyaneleyo yokuhlawula ukuhlala kwakho e-UK.
Ukuba awuphumelelanga ekufumaneni i-visa nceda usithumelele ikopi yefomu yokwala i-visa kwaye siya kwenza amalungiselelo okubuyiselwa kwemali ehlawuliweyo. Siza kubuyisa yonke imirhumo ngaphandle kwekhosi yeveki enye kunye nemirhumo yendawo yokuhlala ukuhlawula iindleko zolawulo.
© 2017 Isikolo soLwimi oluPhakathi, eCambridge